पालका यी चर्चित नायिकाका बाहिरिए से’क्स भिडियो ! - Mitho Khabar
पालका यी चर्चित नायिकाका बाहिरिए से’क्स भिडियो !
June 22, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on पालका यी चर्चित नायिकाका बाहिरिए से’क्स भिडियो !
प्रविधिको दुरूपयोग गरी इन्टरनेटमा नेपाली से”क्स भिडियो अपलोड हुने क्रम रोकिएको छैन । विश्वमा चर्चित रहेका कतिपय पो’र्न साइटहरूले नेपाली से’क्स भिडियोलाई प्राथमिकताका साथ राखेका छन् । त्यसमा नेपाली सेलिब्रिटीका ‘लिक’ भएका भिडियोहरू चर्चामा छन् । पछिल्लो समय मोडल बताउने परि तामाङको भिडियोले चर्चा पायो ।
नेपालमा चलेका साइटहरूमा नेपाली युवती र सेलिब्रिटीका से”क्स भिडियो राखिएका छन् । यस्ता भिडियो बनाएका कसुरमा कतिपय कलाकारले जेल जीवन पनि बिताइरहेका छन् । जसमा हास्य गायक प्रकाश ओझा जेल जानुको कारण उनले बनाएको भनिएको से”क्स भिडियो सार्वजनिक हुनु थियो । ०६१ सालमा पक्रा*उ गरी जे*ल पठाइएका उनी छुटे
अभिनेत्री ज्योति खड्कासँगको यौ”न क्रियाकलापको भिडियो ओझाले बनाएको आरोप छ । खड्काले दे*हत्याग गरिसकेकी छन् । कान्तिपुर टिभीको सिरियल तिते करेली खेल्दा खेल्दै ज्योति खड्का अ’श्लील भिडियोका लागि तयार भएकी थिइन् ।
उक्त भिडियो इन्टरनेटमा भाइरल भएपछि मान*सिक त*नाबमा रहेकी उनी केही समय फिल्म क्षेत्रमा अभ्यस्त भए पनि लामो समय बाँच्ने निर्णयमा कायम रहिनन् ।
नम्रताको साहासलाई धेरैले प्रसंशा र सम्मान गर्छन । उनलाई सानदार अभिनय गर्ने र सुन्दरी नायिकाको रूपमा लिइन्छ । उनको साहसी नारीको रूपमा चर्चा हुने गर्छ ।
जंगल क्वीनलगायतका कतिपय फिल्ममा उनले नाम परिवर्तन गरी अभिनय गरिन् । दे*हत्याग अघि उनको नाम जेशिका खड्का थियो । ओझालाई प्रहरीले ज्योतिसहित तीन बालिकाको यौ’न शो’षण गरेको आरोपमा पक्रा*उ गरी मु*द्दा चलाइएको थियो ।
यस्तै से”क्स भिडियो इन्टरनेटमा बाहिरिएकी अभिनेत्री हुन् नम्रता श्रेष्ठ । श्रेष्ठले राजीखुसीमा तत्कालिन प्रेमी डिजे तान्त्रिकसँग गरेको यौ*न कार्यकलापको भिडियो भाइरल भयो । कतिपय पो’र्न साइटहरूमा उक्त भिडियोलाई अहिले पनि देख्न सकिन्छ ।
नम्रता मा नसिक तनाबमा रहेपनि केही समय पछि नेपाली फिल्ममा उनको सक्रियता रह्यो । अहिले फिल्मी दुनियाँमा उनी पुनस्र्थापित भएकी छन् । तर, त्यो भिडियोले उनलाई कहिलेकाहीँ भने सताउने गरेको छ । तरपनि उनको साहासलाई धेरैले प्रसंशा र सम्मान गर्छन । उनलाई सानदार अभिनय गर्ने र सुन्दरी नायिकाको रूपमा लिइन्छ । उनको साहसी नारीको रूपमा चर्चा हुने गर्छ ।
अभिनेत्री तथा मोडल पुजा लामाको पनि अ’श्लिल भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । यो भिडियो सार्वजनिक सँगै फैलिएपछि लामाले आफ्ना पार्टनरसँग विवाह नै गरिन् । भिडियो इन्टरनेटमा भाइरल हुने क्रममा उनले विवाह गरेकी थिइन् । अहिले रङ्मञ्चबाट भने उनी गुमनाम जस्तै छिन् ।
मोडल जेनिशा मोक्तानको नाममा पनि अ’श्लील भिडियो सार्वजनिक भएको दाबी गरिए पछि उनले त्यसको विरोध र खण्डन गरिन् । उनी ठूलो घरानामा विवाह गरी दाम्पत्य जीवन विताइरहेकी छन् । साथै जनआस्था साप्ताहिकमा अभिनेत्री श्रीषा कार्कीको न’ग्न तस्बिर छापिए पछि त्यसलाई सहन नसकेर उनले दे*हत्याग गरेकी थिइन् ।
अभिनेत्री तथा सेलिब्रिटीहरूका बाहिरिएका यौ’न भिडियोले फिल्मी क्षेत्रलाई केहि धुमिल त बनाएको छ नै तरपनि बदलिदो समाजमा सामान्य बन्दै र सोचिदै जान पनि थालिएको छ ।
सार्वजनिक बसमै एक जोडी यस्तो अवस्थामा भेटिए, भिडियो बन्यो एकाएक भा’इरल
पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरे पनि हामीले पशुपतिको रक्षा गर्न सकेनौ